Iprofayili Company - Yangzhou Jetway Tourism Co., Ltd
Ezenza Hotel Beka
Hotel amazinyo Kit
Hotel kokuyicheba Kit
Yasekwa ngo-2001, inkampani yethu ise-Yangzhou, kwiPhondo Jiangsu, China. iimveliso zethu ezininzi ukusuka Accessories Igumbi lokuhlambela, Accessories lokulala ku Cosmetic Accessories, njl Emva 16years uphuhliso, inzuzo yethu yonyaka elithe ladlula izigidi ezili-12 zeerandi. Ngapha koko, ukuze anikele inkonzo engcono abathengi kunye neemveliso kwamnandi kwakho, thina ikunika ngenkqubo yemveliso yobungcali, ulawulo olungqongqo ngezixhobo ekrwada, Complete inkqubo yolawulo lomgangatho ngokunjalo umthamo enamandla manufactory.
Ibekwe ehotele enomtsalane iRama, mveliso yethu ihlanganisa indawo iyonke ka 6000 yezikwere, kubandakanywa oomasifundisane 6, yokugcina kunye nemigca yemveliso 12. ikhono supply mveliso Wethu ifikelela million 20 iiseti nyanga nganye. abasebenzi abanamava 150 neqela lethu nolawulo lomgangatho angaqinisekisa imveliso arcade games.
Okokuqala, kufuneka iqela QC yobungcali ukulawula imveliso. Okwesibini, kufuneka zonke iingxelo ezineenkcukacha iimveliso nonconformity. Ekugqibeleni, Senza bagcine iikhowudi ezifanelekileyo wokuziphatha & nemithetho kurhulumente.
zingenziwa nobukhulu, iintlobo & imibala uku-oda. Unakho sithumele neemfuno zakho eneenkcukacha kwaye siya kukuvuyela ukulungiselela locaphulo ngamnye imveliso yakho emva kokufumana ulwazi lwakho. Xa sele kwenziwe ukhetho lwakho, wena lungu lethu iqela imveliso Umcebisi ezizodwa ziya kusebenza nani graphic iinketho ezibalulekileyo kunye nexesha ukunikezelwa.
team design Professional
iqela Professional kuquka ingcibi kunye nabasebenzi zobugcisa. Iqela lethu uyakwazi ukuyila iimveliso ezahlukeneyo ngokwe iingcamango zakho.
abathengi bethu ikakhulu kuza kuba Melika, eYurophu, market eliphakathi-ukunyusa Asia. Kwaye zithunyelwa kumazwe angaphezu kwama-70 kunye nemimandla.
Iipasela kweemveliso babe ibhokisi yekhadibhodi, ibhokisi uvuselele iphepha, ingxowa-Eco-friendly, ibhegi PE, iphepha incence, PP umboniso, ikhadi blister. Kwaye umbala, ubungakanani, ushicilelo logo zonke ezi phakheji 'ukuba kwenziwe izicelo zomxhasi ngayo.
Party yoNyaka ka-2017
Misela Up Branch yethu New In eBeijing